मृत्युको मुखमा जनता « Drishti News
मृत्युको मुखमा जनता
नेपालमा कोरोनाबाट एक लाख ७ हजार ७५५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण ६ सय ३६ जनाले ज्यान गुमाइसके । यो तथ्यांक कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको उर्वरथलो चीनको वुहानभन्दा धेरै हो, जबकि चीनमा हालसम्म ८५ हजार ५५७ जनामात्रै संक्रमित भएका छन् । नेपालमा दैनिक संक्रमित बढिरहेका छन् । मृत्यु हुनेको ग्राफसमेत बढ्दैछ । पछिल्लो साता यता दैनिक दुई हजारबढी नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन् । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने आन्तरिक कलहमै व्यस्त छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको ८ महिना भइसक्यो । यो अवधिमा कोरोना नियन्त्रण होइन, भयावह बनेको छ । यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफलता हो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान लागेको स्वास्थ्यविज्ञहरुले बताइसकेका छन् । तर, अझै सरकार कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइसोलेशन र भेन्टिलेटर भरिभराउ भएको भन्दै ‘अप्ठेरो अवस्था’मा पुगेको बताइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइले जनता झनै त्रसित छन् । दुई जनामात्रै संक्रमित हुँदा सरकारले देश लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन खुलेसँगै महामारी बन्यो । तर, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कार्यमध्ये सामुदायिक परीक्षणको दायरालाई बढाउन सकेन । अझै सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य सामग्री र पूर्वाधारहरुको अवस्था उ बेलाकै छ, जतिखेर नेपालमा दुई जनामात्रै संक्रमित थिए । ती भएका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएका छन् । त्यसैले दैनिक थपिँदै जाने संक्रमितका लागि आइसोलेन र भेन्टिलेटर अभाव हुने निश्चित छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शैया थप्ने, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या थप्ने काम जरुरी हुन्छ ।
अर्कोतर्फ व्यापक परीक्षण गरेर धेरैभन्दा धेरै संक्रमितको पहिचान गरेर कन्ट्याक्ट टे«ेसिङमार्फत अन्य सम्भावित संक्रमितसँग पुग्न आवश्यक छ । ती संक्रमितलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सुविधा उपलब्ध गराउन सके समुदायमा नयाँ संक्रमण नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ । अहिलेकै स्थिति हेर्ने भने काठमाडौं उपत्यकामा भयावह स्थिति टाढा छैन । यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि भयावह स्थिति आइहाले अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारका लागि महँगो सावित हुनेछ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वले कमाण्ड लिनुपर्छ । जसका लागि प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल र सल्लाह गरेर तत्काल गर्नुपर्ने काममा खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । यो संकटको अवस्थामा जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेको पनि यति हो । तर, अपेक्षाभन्दा टाडा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै जना घरझगडामै व्यस्त छन् । जसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश थपिँदै गएको छ ।
कोरोना संक्रमणले दैनिक मजदूरी तथा ज्यालादारी नगरी हातमुख जोर्नसमेत मुश्किल छ । सरकारले गत चैत ११ गते यता विभिन्न तीन चरणमा लकडाउन गरेर ढुक्क बस्दा श्रमिक तथा मजदूर भोकभोकै भए भने संक्रमित रातारात बढ्दै गए । यो कुरा सरकारले मनन गरेको छ कि छैन ? केन्द्रीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सत्ता सञ्चालनसम्म वर्चश्व राख्दै आएको नेकपाले ६ वटा प्रदेश सरकार र चार सय दुई स्थानीय तह हाँकिरहेको छ । यस्तो बेला आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जनचेतनाका कार्यक्रमका साथै राहत दिएर पठाउन सक्नुपर्छ ।
एकातिर कोरोना संक्रमणको महामारी, अर्कोतिर राजनीति खिचातानीले जनता आक्रान्त छन् । सरकारसँग आश्वस्त पार्नेखाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको रणनीति छैन । त्यसैले जनस्तरमा सन्त्रास बढेको छ । उपत्यकामा जसरी संक्रमण फैलँदै गएको छ । यो अत्यन्त जोखिम अवस्था हो । दशैँ–तिहारलगतै सुरु हुने हिउँदमा संक्रमण झनै बढ्ने डब्लुएचओले समेत चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, सरकारसँग तयारी छैन । बन्दाबन्दीमात्रै संक्रमण नियन्त्रणको विकल्प होइन, त्यसबाहेक जनचेतना र स्वास्थ्य संरचना तयारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
संक्रमण नियन्त्रणमा जनताले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । तर, यस्तो बेला जनताले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेन भन्दै सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न मिल्दैन । सामान्य अवस्थामा भन्दा यो संकटको घडीमा जनताले सरकारसँग बढी अपेक्षा गरेको हुन्छ । अहिलेको अपेक्षा भनेको जनस्वास्थ्य नै हो । जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
रक्षाबाट किन फालिए पोखरेल ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेल घटुवा भएका हुन् कि बढुवा भन्ने कुरा नेकपाका
कोरोना संक्रमितहरुले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने गरी सरकारले हुकुम जारी गरेपछि नागरिकको राज्यप्रतिको बचेखुचेको आस्था
नेपालीको महान चाड दशैँ कोरोना संक्रमणको महामारीबीच सुरु भइसकेको छ । बसन्त ऋतुसँगै प्रत्येक वर्ष
यसरी बित्छ, बालुवाटार बैठक
‘मियाँका दौड मस्जिदतक’ भनेझैँ पूर्व नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेदेखि नै बालुवाटार धाउँदै गरेका नेकपाका